Lego Marvel Advent Calendar ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့်စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြသည်
02 / 08 / 2021 02 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 368 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, ထွန်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ခရစ္စမတ်, အားလပ်ရက်, သံမဏိလူသား, Lego, Lego ထွန်းပြက္ခဒိန်, Lego မှ marvel, Lego Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, Lego Spider-Man, Marvel, အသေးစား, Spider-Man, တိုနီ Stark, တိုနီ Stark minifigure
ရာသီအလိုက်နောက်ဆုံးပေါ်အသစ်များ Lego Advent Calendar ပူဇော်သက္ကာများကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ထည့်ပြီးစျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည် Marvel ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar.
စတင်သည့်နေ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်တကွ Lego Marvel ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, LEGO.com အခုလာမယ့်မော်ဒယ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ပုံတွေပြခန်းတစ်ခုနဲ့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ ၎င်းသည်ငေးမောဆွေးနွေးရမည့်အကြောင်းလုံလောက်သောသတိပေးချက်ဖြစ်သင့်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ဆောက်မှု ၂၄ ခုကိုပထမတွင်ထည့်သွင်းထားသည် Marvel ရာသီအလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားနှင့်အတူ အတိတ်အစုံ၏ microscale ဗားရှင်းများ ပရိသတ်များလက်ထဲရောက်ရန်သီးသန့် minifigures အချို့နှင့် ၎င်းသည်တစ်ခုကိုလည်းအကျယ်ချဲ့သည် အဟောင်းတွေ Module အသစ်နှစ်ခုနှင့် Iron Man ဖန်တီးမှု
တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှပေးအပ်သောပုံများသည်နေ့စဉ်တံခါးများရှိမော်ဒယ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရုံသာမကပုံတစ်ပုံသည်ပွဲလမ်းသဘင် Iron Man နှင့် Spidey အတွက်သီးသန့် minifigure ဒီဇိုင်းနှစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Tony သည်သူ၏ arc reactor များပေါင်းစပ်ထားသော Christmas Jumper ကိုကျေနပ်နေပုံရသည် Spider-Man သူ၏ပုံမှန်အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်ယူနီဖောင်းထက်နွေးထွေးသောအင်္ကျီကို ၀ တ်ထားသည်။
အဆိုပါ Lego Marvel ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar ဈေးဝယ်သူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်artစက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်ပေါင် ၂၄.၉၉ / ၃၉.၉၉ / € ၂၉.၉၉၊ အခြားအကြောင်းအရာလေးမျိုးမှတူညီသောနေ့၌ ဟယ်ရီပေါ်တာ, Star Wars, CITY နှင့် Friends ဒီနှစ်မှာမင်းအားလပ်ရက်တွေကိုဘယ်နှစ်ရက်ရေတွက်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့မင်းအချိန်အများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။
← New Venom2trailer သည် LEGO Carnage ကိုအနီးကပ်ကြည့်သည်
Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? LEGO minifigure ၏အနာဂတ်အတွက် Season2၏အရိပ်အမြွက် →